ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2019
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်gladiator"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအဖြစ်မှန်သင်တို့ဆီသို့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝင်ပတ်သက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစသည်တို့မှထမြောက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူကသူ့ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အစဉ်အဆက်တယ်ထားပါတယ်အရှိဆုံးလူနာတိုက်စစ်မှူးများထဲမှဖြစ်စေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှောင့်နှေးလက်ခံရန်သို့မဟုတ်သည်းခံနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဆော်လမွန် Rondon ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝ & မိသားစုနောက်ခံ
ဟိုဆေး Salomon RondónGiménez Friday, ဗင်နီဇွဲလားအတွက် Catia များ၏လူဦးရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၌သူ၏မိခင်, Maitana Giménez (ကအိမ်အကူ) နှင့်ဖခင်ဟိုဆေးရာဖေးလ်Rondón (ကဓာတုဗေဒဆရာမ) မှစက်တင်ဘာလ 16 ၏ 1989th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘများ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ Parents- MOTHER- Maitana Giménezနှင့်ဖခင်-ဟိုဆေးရာဖေးလ်Rondónစဉ် (Credit မှ IG)
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့မွေးဖွားတစ်ချိန်ကသူ့သားရဲ့ Pre-မွေးဖွားတဲ့အကောင့်တစ်ခုပေးတဲ့သူသည်မိမိအဘသည်နှင့်အညီခွဲခန့်မှတ်သားခဲ့သည်။
"ဟုသူမကကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အခါကငါ့ဇနီး, အလွန်ကြီးမားတဲ့ဝမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီအချိန်က, ငါ့နှမ-In-ပညတ်တရား၏တစ်ဦး Admiral ခဲ့သည် ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာ အဆိုပါ 1986 ကမ္ဘာ့ဖလား၏။ အကြောင်းမူကား, ဒါဟာအခါတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာဂိမ်းတစ်ခုမြင်ဘူးသောအထဲကလှည့် မာရာဒိုနာ ကစား, ကလေးရှောလမုန်မင်းသည်သူ၏အမိ၏ဝမ်း၌ထက်ပိုကန်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့နှမ, ငါ့မွေးသေးသောသားတစ်ဦးဘောလုံးကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့သူမလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဟိုဆေးရာဖေးလ်Rondónပြန်ပြောပြ။
Rondon နောက်ဆုံးမှာသည်သူ၏လူလတ်တန်းစားမိသားစုအိမ်ထောင်စု၌သူ၏မိဘများထံသို့ဒုတိယသားအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့အကြီးတန်းသုံးနှစ်ကြာသည်နှင့်3နှစ်ပေါင်းမိမိအငယ်တန်းသူလည်းမိမိဆိအစ်ကို Onlymai သူကို Gerardo, မိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
ဆော်လမွန် Rondon ညစဉ်ညတိုင်း, လမ်းလျှောက်ကန်နှင့်ဘောလုံးနှင့်အတူအိပျပျြောနေဖြင့်အဖြစ်အစောပိုင်းအပေါ်သူ၏ကြမ္မာနထေိုငျစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ဖန်ဆင်းနိုင်သူသည်ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုကနေသူ့ကိုပယ်သွားစီးပဲ့ကိုင်သောဘောလုံးကွင်း၌သူ၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မမွေးဖွားခဲ့တယ်ကတည်းက "ငါအမြဲတမ်းဘောလုံးကိုနှင့်အတူသွားလာနှင့်အရာအားလုံးကန်။ လေးနှစ်ဟောင်းမှာငါသည်ငါ့ကျောင်းမှာကစားတော့တာပဲ။ "
4 ၏နူးညံ့သောနှစ်အရွယ်မှာ Rondon စေခြင်းငှါမိမိရုပ်တုဆင်းတုကိုလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည် Rivaldo နှင့် ရော်နယ်ဒို Luis Nazárioက de Lima.
Rondon ရဲ့ဆရာကျောင်းရဲ့ညစ်ပတ်တရားရုံးများအပေါ်ဘောလုံးကစားရန်သူမ၏သားခွင့်ထောက်ခံချက်သူ၏မိခင်, Maitana seeked သည့်အခါကျောင်းဘောလုံးကစားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တနေ့ရောက်လေ၏။ သူမသည်လက်ခံပြီး Rondon တစ်နေ့တာအတွင်းကျောင်းမှာဘောလုံးကစားစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးအားကစားအောင်မြင်မှုကသူသည်သူ၏ပထမဆုံးဖလားအနိုင်ရရှိရာမိမိအကျောင်းရဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းဂိမ်းကာလအတွင်းရောက်လာတယ်။
clubGulima မှ Rondon ပထမဦးစွာအားကစားအောင်မြင်မှုအတွက် Credit
တောင်မှကျောင်းကမှပြန်လာသောနောက်, ဘောလုံးနေဆဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ကိုညနေခင်းမှာဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောကသူ၏ဒေသခံလူငယ်ကလပ်, စန်းဟိုစေးက de Calasanz မှာစာရင်းသွင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Rondon အမြဲသူတို့ရဲ့သားရဲ့အစောပိုင်းဘောလုံးအမှတ်တရများ၏ထားရှိမည်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွေရဲ့အလေ့အထဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏မိဘများ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဆင်းသွားလေ၏သောလေ့လာမှုများ, တစ်ဦးဖြည့်စွတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဘောလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့အဖေ Cronica တစ်ခု album- ချေးငွေအတွက်သူ့သားရဲ့အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘဝဖော်ပြသည်။
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
ဘောလုံးအဘို့ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်တစ်ခါတစ်ရံအဆိုး, ခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။ ဤသည် Rondon နှင့်သူ၏အစ်ကို Gerardo သူတို့ရဲ့နေအိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်, chandeliers နှင့်ပန်းအိုးချိုးဖောက်ဆုမွန်ကောင်းတယ်တဲ့အချိန်ပဲ။
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့တစ်ဦး Kid (PixaBay မှခရက်ဒစ်) အဖြစ်သူ၏ဘောလုံးဘောလုံးနှင့်အတူသူ့အိမ်ပြတင်းပေါက်ဖဲ့
သူ့မိဘကနေပြင်းထန်တဲ့ဆူလက်ခံခြင်းသူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားအဖြစ် Moni လက်ခံရရှိစတင်သည်အခါမျက်မှန်များအတွက်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်မယ်လို့ Rondon ပြောပြသည်သူ၏မိခင်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Big ဆုံးဖြတ်ချက် Making:
သူ Calasanz အထက်တန်းကျောင်း၏သူ၏ဒုတိယနှစ်တွင်အခါ Rondon အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူဟာဓာတုဗေဒဆရာမနှင့်အတူအလွန်လေးနက်သောစကားပြောဆိုမှုအဖြစ်ယူဆသောအရာကိုရှိသည်ဖို့ကသူ့အဖေရာဖေးလ်ရင်ဆိုင်။
ဆော်လမွန် Rondon နောက်ဆုံးတော့သည်သူ၏ကောလိပ်ပညာရေးစွန့်ခွာခြင်းနှင့်လုံးဝဘောလုံးမှမိမိကိုမိမိကျူးလွန်၏ဘယ်သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုသို့သောဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ကိုအောင်မြင်တဲ့စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်ဒေသခံကလပ်ဒီပို့ Gulima ၏တန်းစီဇယားသို့မအပ်နှံသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။
ဆော်လမွန် Rondon ပို့ Gulima ID ကိုကတ် (ClubGulima မှခရက်ဒစ်)
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
ဒီပို့ Gulima မှာနေစဉ်, ဆော်လမွန် Rondon ဥရောပမှာသူ့မျက်စိရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်းကိုလိုက်ရန်သူ Aragua, ဥရောပမှကစားသမားများထုတ်လုပ်တဲ့များအတွက်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူတစ်လံကလပ်၌သူ၏ဘောလုံးရငျ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဆက်လက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Rondon ကလပ်ရဲ့မီဒီယာ၏အဓိကဘာသာရပ်ဖြစ်လာ Aragua အတွက်ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Fame မှဆော်လမွန် Rondon ရဲ့လမ်းမကြီး (CumpleañosdeFamososမှခရက်ဒစ်)
စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုသူ့ကိုအနိုင်နိုင်တစ်နှစ်ကသူတို့လူငယ်ရာထူးဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကလပ်ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့သို့ရာထူးတိုးတယ်။ 17 ၏အသက်အရွယ်မှာ Rondon ဗင်နီဇွဲလားလာလီဂါ၌သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ သူသညျမိမိတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်သူအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်တယ်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမအချိန်ကိုယူ။
Aragua နှင့်အတူဆော်လမွန် Rondon ရဲ့အောင်မြင်မှုပုံပြင် (AS မှခရက်ဒစ်)
အဲဒီနှစ်များတွင် 2008, Rondon ဥရောပတိုက်တွင်ကစားရန်အိပ်မက်သူကရိုက်ယူခဲ့သည်ခံခဲ့ရပြီးနောက်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်လာခဲ့သည် UD လာ့စ်ဗီး Palma စပိန်တွင်။ နေအိမ်စွန့်ခွာ၏စိတ်ခံစားမှုယခုအချိန်တွင်အကြောင်းကိုပြော Rondon တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့့သည်က ...
"ဥရောပငါ့မိသားစုထွက်ခွာအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုငါ့မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကား '' Go! 'ခဲ့ သူမကပြောသည်သောအခါအကြှနျုပျအ mum, ငိုခဲ့သည်။ ငါသိပ်ဟစျကျွောလေ၏။ ကျွန်မအဲဒီအချိန်ကပဲ 19 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မဘာမျှမသိထားသ - ငါတကားဟု Skype ကိုအပေါ်အမြဲခဲ့ပုံကိုချက်ပြုတ်ဖို့ ... မသိခဲ့ပါ '' ဘယ်လိုငါခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်နိုငျသညျ, အမေ ?! '' အကြှနျုပျ၏အဘွား '' ဒယ်အိုးထဲမှာရေထားပါနဲ့ ... '' တူခဲ့ "
ဥရောပမှာတော့ Rondon တိုးတက်မိမိနှင့်ဂါများအတွက်ကစားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာကလပ်နှင့်အတူတစ်ဦးအထင်အမြင်အောင်ကြာမြင့်စွာမယူခဲ့ပါဘူး။ မင်းသိလား?… ဂါတစ်ခုထွန်းသစ်တစ်ခုအိုမင်း Rondon အိုးအိမ်မဲ့ဂိုးသွင်းစက်မှာနေစဉ် ဂိုးသွင်းဘုရင်ရွိုင်း သူ့ကို fustrating နောက်ပိုင်းတွင်အငြိမ်းစားသို့သူ့ကိုအတင်းအကျပ်။
Fame မှဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ထ (talkSPORT နှင့် 20Minutos မှခရက်ဒစ်)
ဆော်လမွန် Rondon တစ်ဦးကအိုမင်းဂိုးသွင်းဘုရင်ရွိုင်း sacking ပြီးနောက်ကတည်းကသူရဲကောင်းဖြစ်ဆက်ပြောသည်။ မိမိအပုံစံကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သူဟောင်းတဦးဗင်နီဇွဲလားဘောလုံးသမားအားဖြင့်သွင်းယူ LaLiga ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏စံချိန်စံချိန် Juan Arango။ အဆိုပါ "ဂါ၏ကယ်တင်ရှင်"ခေါ်တော်မူခြင်းခံခဲ့ရသည် sa သူ့ကိုယ်သူစပိန်ကလပ်ထွက်ပေါက်တန်းဆင်းကူညီပေးနေကိုမြင်တော်မူ၏။
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ဂါ၏ကယ်တင်ရှင်စဉ် (Credit ဖို့ဖြစ်လာ Instagram ကို)
ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
ဆော်လမွန် Rondon ၏အချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝကိုဒရာမာ-အခမဲ့ကြောင့်ရိုးရှင်းစွာအများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှရာတစျခုဖွစျသညျ။ အောင်မြင်စွာဗင်နီဇွဲလားနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဇနီးနှင့်လှပသောလေးတွေရှိတယ်တည်ရှိ။
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ရန်ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ဇနီးနှင့်ကလေးစဉ် (Credit Instagram ကို)
သူက "ယုံကြည်ရာနယူးကာဆယ်လ်အတွက်ဘဝတွေကိုရေးသားခြင်း၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်ဆော်လမွန် Rondonမြို့ကြီး"သူ့မိသားစုကိုပါ။ "ကျနော့်ဇနီး, ငါ့နှစျခုကလေးတွေ, ငါ၏မိခင်-In-ဥပဒေ, ကျွန်တော့်ဇနီး၏အဘွား, ငါ, ငါ့ပတ်ပတ်လည်ငါ့မိသားစုရှိတယ်" Rondónဆိုသည်ကား,
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ခြင်းသူခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအထက်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနေရာသေချာရသောဘဝမှနည်းလမ်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်။
အဝေးကွင်းအတွင်းရည်မှန်းချက်များသွင်းယူ မှစ. , ဆော်လမွန် Rondon သူသည်မိမိအထက်-ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားတိုးပွါးယုံကြည်နေသည့်လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်ခန်းဖျော်ဖြေတန်ဖိုးရှိသောအချိန်သုံးစွဲသည်။ အောက်တွင်ထိုကဲ့သို့လေ့ကျင့်ခန်း၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Rondon Self-ကာကွယ်ရေးများအတွက်အားကစားအဖြစ်လက်ဝှေ့အတွက်ယုံကြည်သည်။ အောက်ကဗီဒီယိုမှာသူသညျမိမိခုခံကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုကသူ့ဆိတ်သငယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးနဲ့ပြဿနာတွေရှာနေတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အားကစားသုံးပြီးဘယ်တော့မှအားဖြင့်ကောင်းသောအသုံးပြုမှုသို့လက်ဝှေ့ထားနိုင်သည်။
ကွာစိန့်ဂျိမ်း '' ပန်းခြံထဲကနေ, သူ့ကလေးများနှင့်လက်ဝှေ့နှင့်အတူကစားခြင်း, Rondon ကသူ့ခွေးနှင့်အတူလမ်းလျှောက်အတွက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဟုတထစ်ချ။
ဆော်လမွန် Rondon နှင့်သူ၏ခွေး (The Mirror ကမှခရက်ဒစ်) ။
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးဘောလုံးသမားများနှင့်တစ်ဦးတည်းသောပရီးမီးယားလိဂ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဧကန်အမှန်အဆော်လမွန် Rondon ရဲ့မိသားစုနှင့်သူ့ကိုဂုဏ်ယူမိမိတိုင်းပြည်လူမျိုး၏မြေတပြင်လုံးပါစေ။ ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့မိဘများနှင့်ညီအစ်ကိုညီအရေးအသား၏ထိုအချိန်က Friday, ဗင်နီဇွဲလားအတွက်အရာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်ကစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကာလကြာရှည်ရဲ့ရန်နိုင်ငံရေးအရမတည်မငြိမ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
မငြိမ်မသက်အတွက်ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့နိုင်ငံ (NBC သတင်းနှင့် Khilafah မှခရက်ဒစ်)
ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းထိန်းချုပ်ထွက်နှင့်အတူအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုထူပြောနေတယ်နှင့်လူသတ်မှုနှုန်းကိုဗင်နီဇွဲလားအတွက်ခွောကျတတျသော။ ပြန်ပေးဆွဲများ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုပြော Rondon တခါကလည်း,
မဟုတ်မှာအားလုံးဗင်နီဇွဲလားအတွက် - "အလွန်အနည်းငယ်သောလူငါ့မိသားစုဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်ငါ့ကိုမြင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးသူကိုသင်တို့သိကြ၏။ သူတို့ကိုငါနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကိုပါကမိသားစုအိမ်မှာအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်မဒါကျနော်တို့အတူတူထွက်သွားကြဘူး။ ငါအဲဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသည့်အခါမှာအားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှမဆိုအာရုံကိုဆွဲဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ "
လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသော်လည်း Rondon တစ်ဦးတစ်ဦးဓာတုဗေဒဆရာဖြစ်ခြင်းကနေအထူးသဖြင့်မိမိအချစ်စရာကောင်းတဲ့အဖေသည်သူ၏မိဘများနှင့်အတူအဘယ်သူကိုဓါတ်ပုံယူရှက်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာဗင်နီဇွဲလားရဲ့စစ်ရေးကျောင်းများ၏တဦးတည်းအတွက်ဓာတုဗေဒပါမောက္ခဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူ၏ဖခင်နှင့်အတူလျှော့ပေါ့ဆော်လမွန် Rondon (Instagram ကိုမှခရက်ဒစ်)
ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
မိမိအ gladiator နာမည်ပြောင်အကြောင်း:
ထိုအဆိုအရ ကြည့်မှန်, ဆော်လမွန် Rondon တစ်ချိန်ကသူသည်မိမိအအမည်ပြောင်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခံရအတော်ပင်ထုတ်ဖော်ပြသ ... "သားရဲ၏။ "ဂါမှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်း။ နယူးကာဆယ်ပူးပေါင်းပေါ်၌ပရိသတ်တွေသူ့ကိုတောင်းဆိုစတင် "gladiator"ပေးသောသူအများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သည်တစ်ဦး nicname ဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်အမည်ပြောင် '' gladiator '' ကြိုက်တယ်။ ဤသည်ငါအစေးအပေါ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအရာဖြစ်တယ်။ ငါသည်ငါ့လက်မောင်းကိုဖွင့်ကြီးတွေကိုကြည့်, လမ်း၌ငါ့ခန္ဓာကိုယ် get နှင့်ငါ့အသင်းများအတွက်ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ "
တစ်ဦး gladiator ကျွမ်းကျင်မှုဗွီဒီယိုအပ်လုဒ်ပြီးနောက် Rondon ကသူ့ပရိတ်သတ်တွေသူတို့ hashtag သုံးပြီး⚽မဟုတ်ဘူးဆိုအရာဝတ္ထုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားနဲ့လှည့်ကွက်များ၏ဗီဒီယိုများပေးပို့တောင်းခံသောကဆုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator ။ အောက်တွင်ဆော်လမွန် Rondon ရဲ့ gladiator ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆော်လမွန် Rondon ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Lionel Messi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်